Home » नेप्से » लगानीकर्तालाई लाग्ने भयो अर्को झड्का धितोपत्र बोर्डले ल्यायो यस्तो नियम
September 1, 2017	1	By khabarservice
अबदेखि दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर खरीद–विक्री गर्न स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) चाहिने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बिहीवार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने सबैलाई प्यान अनिवार्य गर्ने बताएको हो । यद्यपि सबै लगानीकर्ताले प्यान नम्बर लिनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको अवधि पाउनेछन् ।
बोर्डले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी आव २०७४/७५ को प्रमुख नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले आगामी आवमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाका लागि संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गर्ने बताएको छ ।
साथै, अर्थतन्त्रको बढ्दो आकारसँगै पूँजीबजारलाई पनि व्यवस्थित गर्न कर्पोरेट मोडलमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने बोर्डको योजना छ । यसबाट धितोपत्र बजार थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी हुने बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए ।
नयाँ योजनामा बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएको छ । ‘त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न समिति गठन भइसकेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । साथै, बोर्डको यस वर्ष आफ्नो रजतजयन्ती विशेष कार्यक्रमसहित मनाउने कार्ययोजना बनाएको छ । यसै क्रममा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा पूँजीबजारको विस्तारका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताइएको छ ।
कार्ययोजनामा अभौतीकरण (डिम्याट) हुन बाँकी शेयरको किनबेचका लागि पनि उचित व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । पूँजीबजारसम्बन्धी तालीम तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित लेखरचना समावेश गरी सेबोन जर्नल नियमित प्रकाशन गर्ने बोर्डको योजना छ । साथै, रू. ५० हजार राशिको उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ ।
उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट धितोपत्र बजारमा पूर्वाधारको विकास हुनुका साथै बजारको पारदर्शिता र यसप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने बताए । धितोपत्रको दोस्रो बजार देशभर विस्तार भई समग्र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा बढोत्तरी आउने अपेक्षासमेत उनले गरे । नेपालको धितोपत्र बजार दीर्घकालीन पूँजी परिचालनको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा विकसित हुने बोर्डको विश्वास रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले उठाएको प्रश्नमा बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीलगायत प्रतिनिधिले प्रस्ट पारेका थिए । यसअघि कार्ययोजना बनाई आन्तरिक अभिलेख राख्ने गरिए पनि कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक भएको बोर्डको भनाइ छ ।
मध्यरातमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी सरुवा : तनावमा मन्त्रालय
गृहमन्त्री शर्माको पावरले ज्यान मुद्दाका दोषी भगाइएपछि !
के काे झड्का पान लिन कुन चाही कठिन काम हाे